Fitsaboana sy finoana :: Hitondra am-bavaka eny amin’ny hopitaly ny FFKM • AoRaha
Fitsaboana sy finoana Hitondra am-bavaka eny amin’ny hopitaly ny FFKM
Misy fiantraikany ara-tsaina sy ara-panahy ny tsimokaretin’ ny Covid-19, ankoatra ny ara-batana. Ho fanohanana an’ireo marary no hanoloran’ireo Raiamandreny am-panahy ao amin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM) hetsika fitondrana am-bavaka eny amin’ireo Ivon-toerana mitsabo ny Covid-19 (CTC-19), hopitaly ary ny hotely hopitaly. Nisongadina nandritra ny fihaonan’ireo filoham-piangonana ao anatin’ny FFKM sy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis, teny Ambohidahy, io fanapahan-kevitra amin’ny ara-panahy io sy ny fahafahana manatanteraka azy, omaly. Mpitondra fivavahana telopolo isan’andro no hifampizara amin’ireo toeram-pitsaboana ireo.
“Fandraisana an-tanana ny mararin’ny Covid-19 sy ny mpiasan’ny fahasalamana eny amin’ny vavahadin’ady ka mila fampaherezana ara-panahy no hatao. Tena ady mafy no atrehintsika. Efa eo ny fandraisana an-tanana ataon’ny fanjakana amin’ny fanafody, izany hoe ny ara-batana, ary efa nisy koa ny fivoriana niarahana tamin’ny Psikôlôgy ka tsy hadino ny lafiny ara-panahy”, hoy ny minisitra.
Nambaran’ny Pasitera Ratokonindrainy Jaona, tonian’ny foiben’ny FJKM fa zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara ary famonjena ireo olona ao anatin’ny ady mafy tokoa. « Tsy misy vidiny izany fa tena fitiavana ary maimaimpoana. Efa nisy ny asa teo aloha fa izao manokatra varavarana ara-dalàna izao ny tompon’andraiki-panjakana », hoy ihany izy. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa hatrany amin’ny faritra hafa izao hetsika izao.
Fitaterana mihantona an-tariby :: Zotra roa hampitohy an’Anosy-Ambanidia ary Ambatobe
Fanaraha-maso ny fitaterana entana :: Fiara roapolo tratra tsy nahavita fandraisana ara-teknika